China Welded Steel Rebar Mesh Sheet fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Welded simbi rebar mesh shiti iri mesh shiti iro longitudinal reinforcement uye transverse yekusimbisa inorongwa pane imwe chinhambwe uye pamakona ekurudyi kune mumwe nemumwe, uye yese mharadzano inobatanidzwa pamwechete.
Inofanirwa kugadzirwa neCRB550 giredhi inotonhora yakakungurutswa ribbed simbi rebar kana HRB400 giredhi inopisa yakakungurutswa ribbed simbi rebar, kana CPB550 giredhi inotonhora inodhonzwa yakatsetseka simbi rebar.
1) Zvinhu: HRB400, CRB550, nezvimwe.
3) Kurapa kwepamusoro: dema, kana galvanized
Zvinoenderana neyakagadzirwa simbi, welded simbi rebar mesh sheet inogona kukamurwa kuita inotonhora yakakungurutswa ribbed welded simbi rebar mesh sheet, inotonhora yakatenderedzwa yakatenderedzwa welded simbi rebar mesh shiti uye inopisa yakakungurutswa ribbed welded simbi rebar mesh shiti, pakati payo inotonhora yakakungurutswa ribbed welded simbi rebar. mesh sheet ndiyo inonyanya kushandiswa.Zvinoenderana negiredhi, dhayamita, kureba uye spacing yesimbi rebar, welded simbi rebar mesh sheet inogona kupatsanurwa kuita marudzi maviri: akaumbwa akashongedzerwa simbi rebar mesh sheet uye yakagadziridzwa welded simbi rebar mesh sheet.
Parizvino, kune marudzi maviri eakasungwa simbi rebar mesh masheets: rough edges uye yakachena mipendero.
Welded simbi rebar mesh sheet inowanzo shandiswa mukumhanya-mhanya uye njanji subgrade;Industrial workshop pasi;chirongwa chekuchengetedza mvura;Port yard;Commercial building floor;Steel structure workshop;Kuvaka reinforcement panel.
Welded simbi rebar mesh sheet inogona kuvandudza zvakanyanya kunaka kwesimbi bar engineering, kunatsiridza kumhanya kwekuvaka uye kuwedzera kugona kwekongiri yekupokana kwekongiri, uye kuve nehupfumi hwakakwana.
Kuita kwehunyanzvi uye zvakanakira welded simbi rebar mesh sheet:
1.Inogona kuderedza zvakanyanya nguva yemunhu-awa yekuiswa kwesimbi rebar, iyo 50% -70% pasi peiyo yekusunga mesh.
2.Ne dense reinforcement spacing, iyo longitudinal reinforcement uye transverse kusimbiswa kwe welded steel rebar mesh sheet inoumba mesh chimiro kuti iite basa rekubatanidza uye kusungirira pamwe chete, izvo zvinobatsira kudzivirira kuitika uye kukura kwekongiri kutsemuka.Iyo welding simbi rebar mesh sheet pane yakarongwa, pasi uye pasi inogona kuderedza kutsemuka kwekongiri pamusoro ne75%.
3.Inonyanya kukodzera mapurojekiti makuru ekrete.Iyo mesh saizi yewelded simbi rebar mesh sheet ndeye yakajairika, inodarika nekure iyo yemanyorero inosunga mesh.Iyo mesh ine yakakwirira rigidity uye yakanaka elasticity.Paunenge uchidurura kongiri, masimbi esimbi haasi nyore kukotama, deform uye kutsvedza munharaunda.Ukobvu hwekongiri inodzivirira layer iri nyore kudzora uye yunifomu, izvo zviri pachena inovandudza kunaka kweakasimbisa kongiri mapurojekiti.
4. Welded simbi rebar mesh sheet ine zviri nani nzwisisika hupfumi mabhenefiti.